Kufa Abantu Abedlula Amatshumi Amathathu Engozini Yebhasi
Amapholisa ethatha izidubumbu zabafe engozini yebhasi duzane leGweru.
Kulabantu abangafika amatshumi amathathu abafileyo abangamatshumi amabili lathoba minwembili bahle bafela khonapho , engozini yokungqikilana kwebhasi yako Pfochez ebisuka edolobheni leKwekwe isiya eGweru duzane lepulazi le Zongororo, ngoLwesine emini.
Ingozi yebhasi lekhombi edolobheni leKwekwe
Ibhasi ibikwa iphume ivili yahle yampunyuka umtshayeli yayaqondana lekhombi yohlobo lwe benz sprinter ebivelela lapho akade eqonde khona zanqikilana abatshayeli bonke bahle baba ngabanye abafele khonapho. Abakade bephakathi kwekhombi bonke babikwa behle bafa bonke.
Okhulume emele amapholisa aweZRP enguye njalo umqondisi wamapholisa enkabazwe Officer Commanding Midlands Province, uSenior Assistant Commissioner Abigail Moyo ubike ukuba abalimeleyo bonke basiwe esibhedlela seKwekwe kanye lezidumbu zabafileyo.